Izinkinga ezi-5 ze-SEO ezibucayi ezitholwe nge-Screaming Frog | Martech Zone
Izinkinga ezi-5 ze-SEO ezibucayi ezitholwe nge-Screaming Frog
UMsombuluko, May 6, 2013 NgoLwesihlanu, Agasti 30, 2013 Douglas Karr
Wake wakhasa isayithi lakho? Kuyisu elihle ukulungisa ezinye izindaba ezicacile ngesiza sakho okungenzeka ukuthi awukaziboni. Abangane abahle ku- Amasu Esiza usitshele mayelana Ukumemeza Ixoxo le-SEO Spider. Kukhasi elilula elimahhala elinomkhawulo wamakhasi angaphakathi angama-500… anele kumawebhusayithi amaningi. Uma udinga okuningi, thenga ilayisense lonyaka lama- £ 99!
Ngiyakwazisa impela ukuthi ngingaskena ngokushesha kangakanani isiza futhi ngibone lezi zinkinga ezi-5 ezibucayi ze-Injini Yokucinga:
Izinkinga Ezingatholakali ezingama-404 ngezixhumanisi zangaphakathi, izixhumanisi zangaphandle nezithombe. Ukubonisa izithombe ezingatholakali kunganciphisa isiza sakho. Ukubonisa izixhumanisi zangaphakathi ngokungalungile kungakhungathekisa izivakashi zakho.
Izihloko zekhasi yizinto ezibucayi kakhulu zekhasi lakho, ingabe uzisebenzisile ngamagama angukhiye?
Izincazelo zemeta zikhonjiswa njengenchazelo yamakhasi akho kumakhasi womphumela wokusesha (SERPs). Ngokwenza ngcono izincazelo ze-meta, ungathuthukisa kakhulu izinga lokuchofoza emakhasini akho.
Izihloko - I-H1 ithegi yesihloko futhi kufanele ube nesihloko esimaphakathi esingu-1 ekhasini ngalinye. Uma unokuningi, uzofuna ukukuhambisa kwezinye izihloko. Ukumemeza Ixoxo kuzokukhombisa omaki bakho be-H2 futhi… futhi ukuba nokuningi kwalabo abasekhasini elilodwa kulungile. Zonke izihloko kufanele zibe negama elingukhiye ezicebile futhi zihambisane nesihloko sekhasi.
I-Alt Image Alt siza izinjini zokusesha ekukhombeni kahle izithombe zakho futhi ubonise omunye umbhalo wabafundi besikrini nezinhlelo zokusebenza ezivimba umbhalo (njengalapho ushumeka okuqukethwe kwebhulogi lakho kuma-imeyili). Cwaninga izithombe zakho bese ugcwalisa enye ithegi yombhalo ngegama elinegama elingukhiye, umbhalo ofanele.
Esinye isici esihle se- Ukumemeza Ixoxo SEO Spider iyona Imodi yohlu. Ngingathatha ukuthekelisa amakhasi wokuncintisana kusuka kuthuluzi elifana ne- Semrush, lifake kufayela lombhalo, bese ulingenisa ku-Screaming Frog ukuze likhase futhi libuyise ukuhlaziywa kwazo zonke izingxenye zamakhasi ezinga encintisana nawo!
Uma ufuna ukumba ujule ekuthuthukisweni kwenjini yakho yokusesha, sinazo lezi zihloko:
Ungalisebenzisa Kanjani ikhasi le- Ukusesha Kwendawo
Tags: umkhumbiabakhasi bekhasikumemeza ixoxoukusebenzisa ngokugcwele injinisemrushokukhasaseo spiderama-seo amathuluziisisebenzi sewebhu
May 6, 2013 ku-3: 33 PM
Leli ithuluzi elikhulu. Iyashesha, iyasebenza futhi manje uma ivele ihlangane ne-wordpress ukuze ukwazi ukuhlela izixhumanisi namaheda, njll kusuka kulolu hlelo. Lokho kungaba kuhle kakhulu ukuba kube yiqiniso. Umbuzo wami ngokujwayelekile ngukuthi ngabe amamenyu wokudonsela phansi ku-wordpress afana nalawa
May 6, 2013 ku-4: 22 PM
May 7, 2013 ku-4: 34 AM
Siyabonga ngokushiwo kukaDouglas.
Noma isiphi isizathu esenza usebenzise i-'nofollow 'kuzo zonke izixhumanisi zangaphandle ezivela kusayithi noma kunjalo?
May 7, 2013 ku-8: 32 AM
Yebo, ngoba sinokuxhumana okuningi okuphumayo kuzo zonke izindatshana.
May 13, 2013 ku-7: 57 AM
Uxolo, ungaqiniseki ukuthi lokho kunengqondo.
Kungani 'ungalandeli' into oyethembayo futhi oyazisayo?
UJuan Manuel Garrido
May 10, 2013 ku-11: 12 AM
Lokhu kuyamangalisa ngento ethi "Image Alt Tags" ... Ngiyabonga uDouglas!
May 28, 2013 ku-4: 08 AM
Siyabonga ngokubuka konke okufingqiwe kwe-Screaming Frog!
Noma ngisebenzisa elinye ithuluzi ukubhekana nokwenza kahle ekhasini, bekuthakazelisa ukubheka ezinye izindlela laphaya. Esivela ku-arsenal yami yi-WebSite Auditor, futhi ngiyisebenzisela ukuthola izimpinda, amaphutha ekhodi kanye nokuhlaziywa komncintiswano ekhasini. Ngempela, ithuluzi elisekhasini kumele libe nalo, ikakhulukazi manje lapho izinto ezisebenziseka zaba nzima kakhulu kwi-SEO.
May 28, 2013 ku-8: 57 AM
Sisebenzisa iWebhusayithi ye-Auditor futhi, @emmettferguson: disqus. Ithuluzi elihle - sizokwenza nokuthunyelwe kulo.
Nov 6, 2013 ngo-3: 33 AM
Ngisebenzisa ne-WebSite Auditor futhi futhi engikuthandayo ngayo ukuthi akuyona into ebabayo leyo uma iqhathaniswa ne-Screaming Frog kuma-99 Amakhilogremu minyaka yonke
Feb 6, 2015 ngo-11: 34 AM
Idola ngalinye olitshale ku-Screamingfrog elisetshenziswe kahle. Ngama- $ 100 nje ufika lapha imibiko nemininingwane eminingi evela kwamanye amathuluzi kubiza kakhulu futhi ngokwengxenye njengokubhaliselwe ngenyanga.